BBC Somali - Warar - Xildhibaanada Masar Baaarlamaanka dhexgalay
Xildhibaanada Masar Baaarlamaanka dhexgalay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 9 Luulyo, 2012, 12:44 GMT 15:44 SGA
Madaxweynaha cusub ee Masar Maxamed Morsi oo fagaaraha Taxriir ku qabanaya hadalkiisii ugu horeeyay.
Ciidamadii ilaalinayay dhismaha baralamaanka Masar ayaa ka tagay goobta taasoo u suurtagalisayinay xildhibaanada dhismaha galaan. afhayeenka baarlamaanka ayaa sheegay in xildhibaanada ay kulmi doonaan beri.
Masuuuliyiinta milatariga iyo cadaalada ee Masar ayaa qabanaya shir deg deg ah, ka dib markii madaxweynaha cusub ee Masar Maxamed Morsi uu amray in baarlamaanka uu shaqadiisa dib u bilaabo.
Maxkamada dastuurka oo bishii hore kala dirtay baarlamaanka ayaa ka tashanaysa siday uga jawaabi lahayd talaabada uu madaxweyne Morsi qaaday.
Weerarka UNDP waxaa ku dhintay 12 ruux